နို့တိုကျမိခငျတှအေတှကျ မိခငျနို့တိုကျကြှေးခွငျးအကွောငျး သိကောငျးစရာမြား - Lifestyle Myanmar
နို့တိုကျမိခငျတှအေတှကျ မိခငျနို့တိုကျကြှေးခွငျးအကွောငျး သိကောငျးစရာမြား
မိခငျနို့တိုကျခွငျးက ကလေးအတှကျ အာဟာရ ရရှိစခွေငျးအပွငျ ကလေးရဲ့ စိတျကနျြးမာရေး တိုးတတျမှုအတှကျ မရှိမဖွဈလိုအပျသော မိခငျနှငျ့ ကလေးအကွားက စိတျခံစားမှုနှောငျကွိုးကို ခိုငျမာစပေါတယျ။ မှေးကငျးစကလေးကို ပွုစုကိုငျတှယျရတဲ့အခါ မိခငျအသဈတှေ အတှကျ စိနျချေါမှု ဖွဈနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ နို့တိုကျနစေဉျမှာ ကလေးကို ဘယျလိုကိုငျတှယျရမလဲ၊ ဘယျလိုပွုစုစောငျ့ရှောကျရမလဲ ဆိုတာကို မသိသေးတဲ့ မမေအေသဈတှအေတှကျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
၁။ ရငျသားကို ပူနှေးအောငျလုပျခွငျးက နို့ပိုထှကျစပေါတယျ
ပူနှေးစိုစှတျတဲ့ မကျြနှာသုတျပုဝါကိုသုံးပွီး ရငျသားကို နှိပျနယျပေးတာ၊ နို့မတိုကျခငျ ရနှေေးနှေးနဲ့ ခြိုးတာက နို့ပိုထှကျစပေါနိုငျပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ နို့ခြောငျးပိတျတာကိုလညျး တားဆီးကူညီပေးနိုငျပါတယျ။
၂။ Lactation cookies နဲ့ ဖြျောရညျမြားက နို့ထှကျအားကောငျးစပေါတယျ
မမေတေို့အနနေဲ့ နို့ထှကျတိုးဖို့ ဖွညျ့စှကျစာ မသောကျခငျြဘူးဆိုရငျ lactation ကှကျကီးတှေ နဲ့ ဖြျောရညျတှေ စားသုံးပေးလို့ရပါတယျ။ ပဲနံသာ၊ အုတျဂြုံမှုနျ့နှငျ့ ဘီယာခကျြ တဆေးတှကေဲ့သို့သော နို့ထှကျကောငျးစတေဲ့ ပါဝငျပစ်စညျးမြားကို သုံးပွီး အိမျမှာပွုလုပျနိုငျပါတယျ။
၃။ နို့သကျတာကို ခံဖို့ milk-saver ကိုသုံးလို့ရပါတယျ
milk-saverက နို့တှေ တဈစကျစကျကနြရေငျ နှမြောတတျတဲ့ မမေတေို့အတှကျ အထောကျအကူပွု ကိရိယာတဈခုဖွဈပါတယျ။ ကလေးကို ဘယျညာပွောငျးတိုကျနစေဉျမှာ တဈဖကျက နို့သကျတာကို ခံထားဖို့ အသုံးဝငျပါတယျ။
၄။ မိခငျနို့ ဖွညျ့စှကျစာတှကေ မိခငျနို့ထှကျအားကို တိုးစပေါတယျ
မိခငျနို့ဖွညျ့စှကျစာမြားက နို့ထှကျအားကို တိုးစနေိုငျပါတယျ။ လကျဖကျရညျသောကျသလို သောကျလို့ရနိုငျတဲ့ ဖွညျ့စှကျစာတှလေညျး ရှိပါတယျ။ ဖွညျ့စှကျစာသောကျမယျဆိုရငျ အရငျဆုံး ဆရာဝနျနှငျ့ တိုငျပငျဖို့ အကွံပွုပါတယျ။ ဖွညျ့စှကျစာ မသောကျခငျြဘူးဆိုရငျတော့ ဟငျးခြိုမြားမြားသောကျပေးဖို့ အကွံပွုပါတယျ။
မိခငျနို့မှာ ရေ 90%ခနျ့ရှိပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ နို့တိုကျကြှေးနတေဲ့ မမေတေို့အနနေဲ့ ရဓေါတျပွညျ့ဝပွီး ကနျြးမာနစေဖေို့ ရအေလုံအလောကျသောကျဖို့ အရေးကွီးပါတယျ။ နို့ထှကျကောငျးစဖေို့လညျး ကူညီပေးပါတယျ။ နို့တိုကျမိခငျတှဟော နစေ့ဉျနတေို့ငျး ရေ (၉၆အောငျစ) ၁၂ခှကျသောကျဖို့ အကွံပွုပါတယျ။
၆။ လူကွားထဲမှာ နို့တိုကျမယျဆိုရငျ နှဈထပျအင်ျကြီကိုသုံးပါ
လူကွားထဲမှာ နို့လှနျတိုကျရမှာ ရှကျတဲ့ မမေတှေတေို့အတှကျ နို့တိုကျပေါကျပါတဲ့ နှဈထပျအင်ျကြီလေးတှေ ရှိနပေါပွီနျော။ အောကျကစှပျကယျြလို အင်ျကြီမြိုးကို ဝတျပွီး အပျေါက ရှပျအင်ျကြီထပျဝတျတာကလညျး လူမမွငျဘဲ နို့တိုကျလို့ လှယျစပေါတယျ။
၇။ မိခငျနို့ကို ရခေဲခြောငျးလို လုပျပွီးကြှေးနိုငျပါတယျ
မိခငျနို့ကို အေးခဲထားပွီး ကြှေးတာက သှားပေါကျခငျြနတေဲ့ ကလေးတှအေတှကျ သှားယားတဲ့အခါ ဖွလြှေော့ဖို့ အကောငျးဆုံးနညျးလမျးဖွဈပါတယျ။ မမေတေို့ကလေးက အမာစားလို့ ရနတေဲ့ အရှယျရောကျပွီဆိုရငျ ငှကျပြောသီး၊ ပနျးသီး၊ ထောပတျသီး၊ သဈတျောသီး ကဲ့သို့သော အသီးတဈမြိုးမြိုးကို မိခငျနို့နဲ့ ရောဖြျောပွီး ရခေဲခြောငျးအဖွဈ ကြှေးလို့ရပါသေးတယျ။
၈။ နို့ခနျးခွောကျဖို့ ဂျေါဖီထုပျရှကျကို သုံးပါ
မိခငျနို့ကို ကလေး ၆လကြျောအထိ တိုကျပေးဖို့ လိုပါတယျနျော။ လုပျငနျးခှငျဝငျမယျ့ မမေတေို့အတှကျ မိခငျနို့တိုကျတာ ရပျတနျ့ခငျြတဲ့အခါမှာ ဂျေါဖီထုပျရှကျကို ရငျသားမှာ ကပျပေးရငျ နို့တှခေနျးခွောကျစဖေို့ ကူညီပေးပါလိမျ့မယျ။ ဂျေါဖီထုပျက ဖွဈစဉျကို အကူအညီပေးတဲ့ အငျဇိုငျးတှေ ထှကျပါတယျ။
နို့တိုကျနစေဉျမှာ ကလေးကို ဘယျလိုကိုငျတှယျမလဲ?
မိခငျတဈယောကျဖွဈလာပွီဆိုရငျ နို့ဘယျလိုတိုကျရမလဲဆိုတာ အလိုလိုသိနားလညျပမေယျ့ အနအေထားအမြိုးမြိုးကို သိထားဖို့လိုပါတယျ။ ကလေးကို စနဈတကြ ခြီပိုးခွငျးဖွငျ့ မှေးကငျးစကလေးဟာ နညျးလမျးမှနျမှနျနဲ့ နို့စို့လို့ရမှာ ဖွဈသလို နို့သီးခေါငျးနာကငျြခွငျးကို ကာကှယျပေးပါတယျ။ ဘယျအနအေထားက အကောငျးဆုံးလဲဆိုတာကို သိလာပါလိမျ့မယျ။
နို့တိုက်မိခင်တွေအတွက် မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းအကြောင်း သိကောင်းစရာများ
မိခင်နို့တိုက်ခြင်းက ကလေးအတွက် အာဟာရ ရရှိစေခြင်းအပြင် ကလေးရဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေး တိုးတတ်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော မိခင်နှင့် ကလေးအကြားက စိတ်ခံစားမှုနှောင်ကြိုးကို ခိုင်မာစေပါတယ်။ မွေးကင်းစကလေးကို ပြုစုကိုင်တွယ်ရတဲ့အခါ မိခင်အသစ်တွေ အတွက် စိန်ခေါ်မှု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နို့တိုက်နေစဉ်မှာ ကလေးကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ရမလဲ၊ ဘယ်လိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရမလဲ ဆိုတာကို မသိသေးတဲ့ မေမေအသစ်တွေအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
၁။ ရင်သားကို ပူနွေးအောင်လုပ်ခြင်းက နို့ပိုထွက်စေပါတယ်
ပူနွေးစိုစွတ်တဲ့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါကိုသုံးပြီး ရင်သားကို နှိပ်နယ်ပေးတာ၊ နို့မတိုက်ခင် ရေနွေးနွေးနဲ့ ချိုးတာက နို့ပိုထွက်စေပါနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နို့ချောင်းပိတ်တာကိုလည်း တားဆီးကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
၂။ Lactation cookies နဲ့ ဖျော်ရည်များက နို့ထွက်အားကောင်းစေပါတယ်
မေမေတို့အနေနဲ့ နို့ထွက်တိုးဖို့ ဖြည့်စွက်စာ မသောက်ချင်ဘူးဆိုရင် lactation ကွက်ကီးတွေ နဲ့ ဖျော်ရည်တွေ စားသုံးပေးလို့ရပါတယ်။ ပဲနံသာ၊ အုတ်ဂျုံမှုန့်နှင့် ဘီယာချက် တဆေးတွေကဲ့သို့သော နို့ထွက်ကောင်းစေတဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းများကို သုံးပြီး အိမ်မှာပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
၃။ နို့သက်တာကို ခံဖို့ milk-saver ကိုသုံးလို့ရပါတယ်
milk-saverက နို့တွေ တစ်စက်စက်ကျနေရင် နှမျောတတ်တဲ့ မေမေတို့အတွက် အထောက်အကူပြု ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးကို ဘယ်ညာပြောင်းတိုက်နေစဉ်မှာ တစ်ဖက်က နို့သက်တာကို ခံထားဖို့ အသုံးဝင်ပါတယ်။
၄။ မိခင်နို့ ဖြည့်စွက်စာတွေက မိခင်နို့ထွက်အားကို တိုးစေပါတယ်
မိခင်နို့ဖြည့်စွက်စာများက နို့ထွက်အားကို တိုးစေနိုင်ပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်သောက်သလို သောက်လို့ရနိုင်တဲ့ ဖြည့်စွက်စာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဖြည့်စွက်စာသောက်မယ်ဆိုရင် အရင်ဆုံး ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ ဖြည့်စွက်စာ မသောက်ချင်ဘူးဆိုရင်တော့ ဟင်းချိုများများသောက်ပေးဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
မိခင်နို့မှာ ရေ 90%ခန့်ရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် နို့တိုက်ကျွေးနေတဲ့ မေမေတို့အနေနဲ့ ရေဓါတ်ပြည့်ဝပြီး ကျန်းမာနေစေဖို့ ရေအလုံအလောက်သောက်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ နို့ထွက်ကောင်းစေဖို့လည်း ကူညီပေးပါတယ်။ နို့တိုက်မိခင်တွေဟာ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ရေ (၉၆အောင်စ) ၁၂ခွက်သောက်ဖို့ အကြံပြုပါတယ်။
၆။ လူကြားထဲမှာ နို့တိုက်မယ်ဆိုရင် နှစ်ထပ်အင်္ကျီကိုသုံးပါ
လူကြားထဲမှာ နို့လှန်တိုက်ရမှာ ရှက်တဲ့ မေမေတွေတို့အတွက် နို့တိုက်ပေါက်ပါတဲ့ နှစ်ထပ်အင်္ကျီလေးတွေ ရှိနေပါပြီနော်။ အောက်ကစွပ်ကျယ်လို အင်္ကျီမျိုးကို ဝတ်ပြီး အပေါ်က ရှပ်အင်္ကျီထပ်ဝတ်တာကလည်း လူမမြင်ဘဲ နို့တိုက်လို့ လွယ်စေပါတယ်။
၇။ မိခင်နို့ကို ရေခဲချောင်းလို လုပ်ပြီးကျွေးနိုင်ပါတယ်
မိခင်နို့ကို အေးခဲထားပြီး ကျွေးတာက သွားပေါက်ချင်နေတဲ့ ကလေးတွေအတွက် သွားယားတဲ့အခါ ဖြေလျှော့ဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ မေမေတို့ကလေးက အမာစားလို့ ရနေတဲ့ အရွယ်ရောက်ပြီဆိုရင် ငှက်ပျောသီး၊ ပန်းသီး၊ ထောပတ်သီး၊ သစ်တော်သီး ကဲ့သို့သော အသီးတစ်မျိုးမျိုးကို မိခင်နို့နဲ့ ရောဖျော်ပြီး ရေခဲချောင်းအဖြစ် ကျွေးလို့ရပါသေးတယ်။
၈။ နို့ခန်းခြောက်ဖို့ ဂေါ်ဖီထုပ်ရွက်ကို သုံးပါ
မိခင်နို့ကို ကလေး ၆လကျော်အထိ တိုက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်နော်။ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်မယ့် မေမေတို့အတွက် မိခင်နို့တိုက်တာ ရပ်တန့်ချင်တဲ့အခါမှာ ဂေါ်ဖီထုပ်ရွက်ကို ရင်သားမှာ ကပ်ပေးရင် နို့တွေခန်းခြောက်စေဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ ဂေါ်ဖီထုပ်က ဖြစ်စဉ်ကို အကူအညီပေးတဲ့ အင်ဇိုင်းတွေ ထွက်ပါတယ်။
နို့တိုက်နေစဉ်မှာ ကလေးကို ဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲ?
မိခင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင် နို့ဘယ်လိုတိုက်ရမလဲဆိုတာ အလိုလိုသိနားလည်ပေမယ့် အနေအထားအမျိုးမျိုးကို သိထားဖို့လိုပါတယ်။ ကလေးကို စနစ်တကျ ချီပိုးခြင်းဖြင့် မွေးကင်းစကလေးဟာ နည်းလမ်းမှန်မှန်နဲ့ နို့စို့လို့ရမှာ ဖြစ်သလို နို့သီးခေါင်းနာကျင်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဘယ်အနေအထားက အကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကို သိလာပါလိမ့်မယ်။